Kororka tamarta cadceedda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qoraxda' ayaa ku soo noqotay Spain | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta kuleylka ee kuleylka ah, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Caasimadda u ah dib-u-cusbooneysiinta waxay u jeesaneysaa Boqortooyada Spain si ay u sameyso maalgashi ku saabsan tamarta sawir qaadaha. Si ka duwan 10 sano ka hor, daqligaaga waxay ku xirnaan doontaa aasaasiga suuqa halkii ay ka go’aansan lahayd Wasaaradda Tamarta.
Nasiib darrose, Xisbiga Caanka ayaa jabiyay amniga sharciga ee dalka, tanina waxay cabsi gelisay maalgashadayaasha. Xaqiiqdii, waxay sababtay a dalka ku jooji cadceed badan Yurub oo dhan.
Nasiib wanaagse, wanaajinta suuqa iyo isafgarad siyaasadeed ee yurubiyanka ah ee la gaadhay kadib heshiiskii Paris waxay soo jiidanaysaa maalgashiga Spain dhanka sawir qaade mar labaad, kaas oo dhexgalkiisa tamarta isku dhafan ay si dhib yar u daboosho 3% baahida hadda
Iyadoo lagu qiyaasay faa'iido inta udhaxeysa 4% iyo 7% isku celcelis, dulsaarka lacagaha, bangiyada, horumariyeyaasha warshadaha iyo ciyaartoyda dammaanadda ayaa bilaabeysa inay soo saaraan horumar cusub oo ku saabsan tamarta qoraxda.
Marka xigta waxaan arki doonnaa furayaasha qaar:
1 Qiimaha dhimista sawirka qoraxda
2 Qorrax Badan Ayaa Lahelaa
3 Mustaqbalka deynta
4 Iska yaree waraaqaha iyo hubin la'aanta sharciyeed
4.1 PPA (Heshiiska Iibsiga Awoodda)
Qiimaha dhimista sawirka qoraxda
Tani waa qodobka muhiimka u ah kor u kac weyn taas oo la kulantay tiknoolajiyaddan adduunka. Maanta, xayndaabyada sawir-qaadashada ayaa toban jeer ka jaban sidii ay ahaayeen toban sano ka hor.
Tani waxay ka dhigan tahay in tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' ay durba tartan tahay iyada oo aan loo baahnayn kabitaan sidii hore. Xaqiiqdii, ka daraasadii ugu dambeysay Wakaaladda Caalamiga ee Tamarta Cusboonaysiinta (Irena) waxay muujineysaa sida korontada lagu soo saaro qoraxda sawir qaade ay tahay ta ugu jaban dhammaan teknolojiyadda dib loo cusboonaysiin karo.
Hoos u dhaca qiimaha leh waxaa sabab u ah wax soo saarka Shiinaha, halkaas oo ficil ahaan 100% taarikada la soo saaro. Qaar ka mid ah la taliyayaasha ku takhasusay waaxda ayaa ka digaya in lagu xisaabtamo Shiinaha waxay bilaabi karaan inay qaali noqdaan qiimaha taarikada la siiyay oo ah inaysan ku lahayn tartan muhiim ah adduunka oo dhan.
Qorrax Badan Ayaa Lahelaa
Qodob kale oo go'aan leh markay tahay khamaarka Spain waa awoodda dhulkani leeyahay, marka la eego khayraadka qoraxda oo sareeya. Xaqiiqdii, waa waddanka Yurub ee leh shucaaca qoraxda ee ugu badan. Waddanku wuxuu uga faa'iideystaa inuu uga faa'iideysto dalxiiska. Nasiib darrose, awoodda tamarta waa mid aan la adeegsan. Haddii aan eegno xogta, waxaa lagu rakibay Spain dhammaadka 2017 4.675 MW oo ah awoodda sawir-qaadista, halka Jarmalka, oo kheyraadkiisa qoraxda ay aad u yar yihiin isla markaana leh dhul ballaarin la mid ah, waxaa horeyba u jiray in ka badan 40.000 MW oo shaqeynaya.
Qodob kale oo muhiim ah in sharad on renewables waa heerka sare ee compromiso in Midowga Yurub ku kasbaday la dagaalanka isbedelka cimilada iyo goynta suuq geynta.
Tani waxay ku qasbeysaa inay joojiso qiiqa qiiqa sanadka 2050 tanina waxay ku lug leedahay kororka go'aanka wax soo saarka korontada iyada oo loo marayo dib u cusbooneysiinta. Taasi waa sababta waddamada xubnaha ka ah ay u bilaabayaan xaraashyo ay ku rakibaan teknoolojiyaddan u oggolaanaysa inay la kulmaan kootadooda. Inuu la kulmo Heshiisyada Paris la saxeexay sanadkii 2015, khubaradu waxay tilmaameen koronto bixinta dhaqaalaha.
Tani waxay dad badan ka dhigeysaa inay u maleynayaan in baahida koronto ay si xoog leh u kori doonto sanadaha soo socda. Caddaynta tani waa sharad la go'aamiyay in warshado badan oo gawaarida ay u sameynayaan gaariga korontada.
Iska yaree waraaqaha iyo hubin la'aanta sharciyeed
Tamarta sawir-qaadaha ayaa lagu caddeeyay xaraashka ugu dambeeyay ee la cusboonaysiin karo in ay tartami karto iyada oo aan la helin kaabayaasha dadweynaha. Taasi waa, qiimaha suuqa. Nasiib wanaag khasnadda dawladda, ku tiirsanaanta Maamulka ayaa ka sii yaraanaya. Iska yaree waraaqaha markaad rakibayso tas-hiilaad cusub, iyo ixtiraamka qaabdhismeedka sharciyeynta, ayaa gacan weyn ka geysan doona soo jiidashada maalgashi cusub.
PPA (Heshiiska Iibsiga Awoodda)
Sida ugub ah, waxaan haynaa badeecad loo yaqaan PPA (Heshiiska Iibsiga Awoodda). Waa heshiis waqti dheer soconaya oo u dhexeeya koronto-dhaliye qiimahiisa ku iibiya koronto iyo macaamil iibsada. Badeecadani waa furaha, iyada oo aan la helin kaalmada dawladda, bangiyada iyo lacagaha ayaa oggolaanaya inay ku deeqaan raasamaal iyagoo isticmaalaya PPA-daan dammaanad, taas oo u oggolaanaysa horumarka ka baxsan xaraashyadii dhowaa iyo nooc kasta oo gargaar ah.
Sida uu sharaxay agaasimaha guud ee ururka photovoltaic UNEF, José Donoso, "waxaa jira inta udhaxeysa 1.000 MW iyo 2.000 MW oo ka baxsan 4.000 MW oo lagu abaalmariyay xaraashka oo hadda lagu horumarinayo PPA ama si toos ah qiimaha suuqa." Waxaa jira xitaa maalgashadayaasha doonaya si loo qaato halista khalkhalka ee ay bixiso dakhliga ka imanaya suuqa jumlada, oo leh isbeddel ballaadhan.
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah danta cusub ee bangiyadu ku maalgelinayaan mashaariicdan. Si kastaba ha noqotee, halista suuqa iyo waaya-aragnimadii xumaa ee la soo dhaafay ayaa iyaga sii badineysa taxaddar marka la isku durayo lacagaha. Si kastaba ha noqotee, ilaha warshadaha ayaa sharxaya inay jiraan bangiyo caalami ah oo firfircoon isla markaana sidoo kale la dagaallami doona Isbaanishka.
Qaraha dhalinta korontada ee ku jirtay gacanta 'korontada' weyn ayaa sii kordheysa. Oligopoly-ka waxsoosaarka ayaa jabay. Dhab ahaan, Lacagta hawlgabka (Allianz, hay'adaha dadweynaha ee Hontario), ee raasamaal maalgashi (Cerberus, KKR, Oaktree) ama ka yimid kaabayaasha (GIP, Brookfield) ajaaniibtu waxay ku soo jabinayaan waaxda go'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Kobaca tamarta qoraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta' ayaa kusoo laabtay Spain